I-Transit Line Survey-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>Isisindo Esindayo>Ucwaningo Lwezokuhamba
Ukukhethwa komzila kubalulekile ekuthuthweni kwemithwalo esindayo.
Indlela eyenziwe kahle izonciphisa izindleko zokuhamba, inciphise ubungozi obukhona, inciphise imisebenzi yokususa izithiyo futhi iqinisekise ukuphepha, ukuthembeka kanye nesikhathi sokuhamba kwezithuthi ezithwala imithamo ukufika phezulu. Futhi ukhiye wokukhethwa komzila ulele ekubuyiselweni komgwaqo kokuqala, okungukuthi, uphenyo lwangempela kanye nokulinganiswa kwemizila ehlukene.
1.Khetha ezinye izindlela ngokusho kwesipiliyoni. Bheka ibanga lokuhamba kanye nokuba khona kokushayiseka kwezimoto.
Ukuhlolwa okukhethekile kanye nokukalwa kwezinye izindlela (eziqediwe yinkampani yokuhamba). Ngesikhathi sokuphenya, kuyadingeka ukuphenya ngebhuloho, isithiyo sokuphakama, isithiyo sendawo, indawo ephendukayo, izixhumanisi zezindawo ezinemininingwane yezithiyo ezingaba khona kanye nesifinyezo sazo zonke izithiyo ezisendleleni yokuhamba ngenye indlela.
3.Summarize enye izindlela futhi wenze ukuhlaziya nokuqhathanisa. Ngokuya ngamapharamitha okuqala ezindlela ezihlukile, wonke amapharamitha ahlukaniswe futhi afushaniswa ukuze akhombe izithiyo ezibalulekile ezingathinta ezokuhamba. Uma kungenzeka, kuyadingeka ukuthi kuhlolwe ukuphazamiseka lapho kuhamba khona umzila futhi.
4.Khetha izindlela ezinemininingwane zokuphinda ubambe. Khetha indlela enemininingwane ngokuya ngamapheshana afingqiwe wezinye izindlela, ezihlanganiswa nokuhamba nephrojekthi yangempela, bese ufeza isinyathelo esilandelayo sokuthola kabusha umzila onqunyelwe esekelwe kumgomo wokuqalisa ukusebenza kwezithuthi zokuhamba.
5.Yenza ukuqoqwa kwemigwaqo okuningiliziwe. Umsebenzi omkhulu ufaka ukubala imingcele yomthwalo webhuloho, umthamo womgwaqo; ukuhlonza zonke izithiyo; Icacisa izinhlobo zezimvume ezidingekayo zokuhamba nokufuna izixazululo zazo zonke izingqinamba.
6.Road Budget clearance budget. Isabelomali sezindleko eziphelele zokukhishwa kwemvume ngokususelwa emiphumeleni yokuthola umgwaqo ngokuningiliziwe kanye nesicelo semvume.
7.Faka isicelo sesitifiketi senkampani yangaphandle yokubika ngomgwaqo.
Ngokuya ngezidingo zohulumeni basekhaya kanye nezinqubo ezejwayelekile, uma kunesidingo, qinisekisa umbiko wokuphinda ubambe umgwaqo wenhlangano ehlobene neqembu lesithathu kuqala.
8.Faka isicelo seLayisensi Yebhizinisi Lokuhambisa Umgwaqo yamaloli asindayo
Ngokwemithetho nemigomo yendawo, faka isicelo selayisense lebhizinisi lezokuhamba ngemigwaqo esindayo enamadokhumenti ahlobene nawo